self-သန့်စင်ပညာရေးဆရာများကယောဘဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ Duty နမူနာ – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / self-သန့်စင်ပညာရေးဆရာများကယောဘဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ Duty နမူနာ
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 363 views
အများအားအလုပ်ရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်ဒီပလိုမာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောသူမြားမှတပါးလေ့ကျင့်ရေးပြရန်သို့မဟုတ်ပြောပြ. သင်တန်းများတခါတရံ Self-တိုးတက်မှု nonvocational ပါဝင်နိုင်ပါသည်,, နှင့် nonacademic ဖြစ်ကြောင်းကိစ္စရပ်များ. မေလညွှန်ကြားချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်သမားရိုးကျပညာရေးအသင်းအဖွဲ့အတွက်ဖြစ်ပျက်မပြုစေခြင်းငှါ.
အကငျြ့သင်တန်းများ, သင်တန်းများ, နှင့်ဆန္ဒပြပွဲများ, နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေး-ဘဏ္ဍာရေးအဖြစ်ဘာသာရပ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ပေးဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကပညာရေးပူဇော်, ဓာတ်ပုံ, ပြင်ဆင်နေ, လမ်းညွှန်, ရေးသား, ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး, နှင့်ပျံ.
ကျောင်းသားကိုစောင့်ရှောက်မည်’ သူတို့ရည်မှန်းချက်ဖြည့်ဆည်းကြောင်းသေချာစေရန်ထိရောက်မှု, နည်းပြအလုပ်ကိုလိုအပ်ချက်များကို, နှင့်အဆင့်အတန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတိုးမြှင့်များအတွက်အကြံပြုချက်များထုတ်လုပ်ရန်.
အခြားအဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြည့်ရန်ကျောင်းသားများကို, နှင့်လိုအပ်ချက်များကို, ကန့်သတ်, စွမ်းရည်, ကိလေသာ.
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်သီးခြားစီကျောင်းသားပြရန်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဘို့အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအလေ့အကျင့်အသုံးချဖို့, စကားစမြည်, နှင့်တင်ပြချက်များ.
အားလုံးလေ့ကျင့်ရေးအတှကျကွဲပြားရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် Create, devices များ, နှင့်တာဝန်ကျနှင့်သင်ယူသူမှဤရည်မှန်းချက်များစကားပွော.
ဤအစှဲမွဲဖို့လည်းရွေးချယ်စရာလေ့လာနေဆန်းစစ်ရန်ခက်ခဲအလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူရှိဖှယျအားဖြင့်ထပ်မံကြီးထွားနှင့် ပတ်သက်. ကျောင်းသားပြင်ဆင်ပါ.
လူတန်းစားလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်စာသင်ခန်း Make.
သင်တန်းတစ်ဦးမျှတသောနည်းလမ်းအဘို့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် Carryout နှင့်ကွိုတငျပွငျဆငျ, သရုပ်ပြ, နှင့် worktime ရွေးချယ်စရာပြဿနာနှင့်အတူသင်ယူသူနှင့်အတူသငျသညျပေး, ကြည့်ရန်, နှင့်ဆနျးစစျ.
စုစည်းမှုများပညာပေးအစီအစဉ်ရည်ရွယ်ချက်များကိုပွငျဆငျ, နှင့် session တစ်ခုသင်ခန်းစာများစိတ်ကူးများ.
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့တက်ရောက်ရန်, အရည်အချင်းပြည့်မီအစည်းအဝေးများ, နှင့်အတန်းခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်အထူးကုအရည်အချင်းကိုတက်ထားရန်.
လေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းအရာအကဲဖြတ်ရန်, အလေ့အကျင့်, နှင့်ကျောင်းသားအကဲဖြတ်အတန်းအစားဗားရှင်းမဟာဗျူဟာများထုတ်လုပ်ရန်, တိုးတက်မှုနှုန်း, သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းရေး, နှင့်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုအကဲဖြတ်ရန်.
အမျိုးအစားတာဝန်တွေချဉ်းကပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲ, ဧရိယာခရီးစဉ်, သည်အခြားလှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်ချိန်း, သို့မဟုတ်ဧည့်စပီကာ, ဤအလှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့်နားလည်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲ.
ပါးစပ် Make နှင့်ပေး, ရေးစပ် , နှင့်စာမေးပွဲများ, နှင့်ထိရောက်မှုကိုမှဆွေမျိုးအရည်အသွေးတွေကိုထုတ်ပြန်.
အဆင့်နှင့်ကိုယ်စားလှယ် type ကိုအခြေခံနှင့် function ကို.
အပိုဆောင်းအကူအညီလိုအပ်ကျောင်းသားများကိုနှင့် ပတ်သက်. ကုစားဖြစ်ကြောင်းအစီအစဉ်များကိုပြင်ဆင်ပါနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်.
လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစျေးကွက်မှအပန်းဖြေသည်အခြားဖြစ်ကြောင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လည်းလှုပ်ရှားမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်, ပညာတတ်, နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ.
ကွန်ပျူတာများ employ, အမြင်အာရုံအသံကူညီပေးသည်, ထုတ်ကုန် display တွေလုပ်ဖို့နဲ့အခြားကိရိယာများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ.
ရယူ, ခူး, နှင့်ပြဿနာစာအုပ်များ, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, နှင့်သင်တန်းများသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်. ထုတ်ကုန်.
Reading အသိပညာ-နားလညျမှုဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းအလုပ်စာရွက်စာတမ်းအတွက်အကြောင်းအရာနှင့်စာကြောင်း created.
အခြားအ-လူတွေကိုလက်ရှိဟုအဘယ်သို့အပေါ်တက်ကြွစွာနားထောင်ခြင်း-ပေးဝေနေတပြင်လုံးကိုအာရုံ, သငျသညျတညျဆောကျခံနေရသည့်အချက်များကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့အတှကျအခြိနျရှိခြင်း, မှန်ကန်သောအဖြစ်ကိစ္စရပ်များကိုမေးမြန်းခြင်း, နှင့်မလျော်ကန်သောအခါသမယမှာကြားဖြတ်မဟုတ်.
မဟာဗျူဟာ-ရွေးချယ်ခြင်းသင်ယူခြင်းနှင့်အခြေအနေကနည်းပြတငျပွ coachingPERtutorial အလေ့အထများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအသုံးချဖို့သို့မဟုတ်အသစ်အချက်များကျွမ်းကျင်လာသောအခါ.
မိမိကိုယ်ကို၏ခြေရာကောက်-OverseeingPERExamining လုပ်ဆောင်ချက်ကို, သည်အခြားတစ်ဦးချင်းစီ, or corporations to generate improvements or consider remedial steps.
othersI အပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်း Dexter-ထိန်းညှိခြင်းလုပ်ရပ်များ.
installation-ထည့်သွင်းခြင်း applications များ, မော်ဒယ်များ, ဝါယာကြိုးများ, features တွေတက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် Device များ.
စစ်ဆင်ရေးခြေရာကောက်ကြည့်နိုင်သောနောက်ထပ်ညွှန်းကိန်း, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, or indicators to make sureamachine is working correctly.
ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးစာမေးပွဲ-ကွပ်မျက်စမ်းသပ်မှုများနှင့်အကဲဖြတ်, ဖြေရှင်းနည်းများ, သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကဲဖြတ်ဖို့.
Analysis-Deciding what sort of process must perform and the way improvements in operations, ဝေဒနာတွေက, as well as the environment may affect outcomes.
Systems Evaluation-Determining steps or signals of system performance along with the actions hadaneed to strengthen or right effectiveness, စက်၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ.
Timemanagement-Controlling the private moment and also others’ တဦးတည်း၏တခဏ.
Supervision of Financial Resources-Deciding how money is likely to be used to acquire the job completed, ဤအခကြေးငွေများအတွက်ရောင်းချမှု.
ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများ-လေ့လာသူများအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အင်္ဂါရပ်များစံပြအသုံးချဆီသို့ဦးတည်ရှာဖွေတာ, ဂီယာ, နှင့်မရွေးပါဘူးဖို့လိုအပ်ပစ္စည်းများ operate.
ဝန်ထမ်းအရင်းအမြစ်များ-directing ရှေးရှေး၏ကြီးကြပ်မှုသူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ဖွံ့ဖြိုးဆဲ, နှင့်အလုပ်တွန်းအားပေး, အလုပ်များအတွက်အထိရောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအဆုံးအဖြတ်.
ကျော်လွန်2နှစ်ပေါင်း, ရန်-Up နှင့်လေးနှစ်အပါအဝင်
ဇှဲကောငျးခွငျး – 85.78%
စီမံကိန်း – 89.04%
အမိန့် – 91.30%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 86.93%
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှု – 93.85%
ယဉ်ကျေးမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – 81.93%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 89.06%
ဖိအား Threshold – 89.24%
customization / Mobility ကို – 93.76%
ပါဝင် – 95.68%
Depth ၏အသိအမြင် – 90.52%
သမာဓိရှိခွငျး – 96.11%
လွတ်လပ်ရေး – 95.78%
သစ်လွင်မှု – 92.51%
စဉ်းစား – 87.74%